Beauty Archives - Nalonetardiary
ဆရာကြီးခင်ဗျ ဆားဝက်ခြံပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းခင်ဗျ…. ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး အမှည့်ကို ချေ ။ ကြေညက်အောင်ခေါက်ပြီး ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာမှာအုံထားပါ။ သိပ်များရင်တော့ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ရောထည့်နယ်ပြီးအုံပါ။ မိနစ်(၂၀)ခန့်ထားပြီးရင် မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့သစ်ပြီးမှ သနပ်ခါးအမြစ်ကိုသံပရာရည်နဲ့ရောသွေးလိမ်းပါ။ အိပ်ယာဝင်ခါနီး ပြုလုပ်ရင်ရပါတယ်။ Kyi Lwin Myint – Mudra Zawgyi ဆရာႀကီးခင္ဗ် ဆားဝက္ၿခံေပ်ာက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလည္းခင္ဗ်…. ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီး အမွည့္ကို ေခ် ။ ေၾကညက္ေအာင္ေခါက္ၿပီး ဆားဝက္ၿခံရွိတဲ့ေနရာမွာအုံထားပါ။ သိပ္မ်ားရင္ေတာ့ ဂ်ဳံမႈန္႔အနည္းငယ္ေရာထည့္နယ္ၿပီးအုံပါ။ မိနစ္(၂၀)ခန္႔ထားၿပီးရင္ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးနဲ႔သစ္ၿပီးမွ သနပ္ခါးအျမစ္ကိုသံပရာရည္နဲ႔ေရာေသြးလိမ္းပါ။ အိပ္ယာဝင္ခါနီး ျပဳလုပ္ရင္ရပါတယ္။ Kyi Lwin Myint – Mudra
ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ပြီး ဆံသားခြောက်သွေ့တဲ့သူတွေအဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဆံသား ခြောက်သွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဆံကေသာ ထိန်းသိမ်းရခက်ခဲခြင်း၊ ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ပျက်စီးလွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆံကေသာ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်း အဓိကအားဖြင့်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလေထုညစ်ညမ်းမှု၊ နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု၊ ဖုန်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ ရေကူးကန်မှာပါတဲ့ ကလိုရင်းတွေ၊ ဆားငန်ရေတွေဟာ သင့်ဆံကေသာကို ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံပင်ပုံသွင်းစက်တွေ၊ ဟော်မုန်း မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့တာတွေကြောင့်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံကေသာ ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းတာကို သက်သာအောင်လုပ်လို့ရသလား ရပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆံပင်ကို အုန်းဆီလိမ်းပြီး ၁ နာရီလောက် ထားပေးထားကာ ခေါင်းလျှော်ချနိုင်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို အဆီ၊ Serum လိမ်းပေးပါ။ ခေါင်းလျှော်တိုင်းမှာ ပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ။ သဘာဝပေါင်းတင်နည်း ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာနဲ့ ဆံသားအရောင်မွှဲတာတွေအတွက် ပျားရည်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ … Read more
Categories Beauty Tags ဆံကေသာ
ဆံပင်ပျက်စီးခြင်း၊ နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့အတွက် အိမ်တွင်းနည်းလမ်း
ချစ်တို့ရေ…. မင်္ဂလာပါရှင် အရင်အပတ်တွေ​က skin care နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ sharing လုပ်ပေးခဲ့တာမို့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တောင်းဆိုမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ hair care/ hair treatment လုပ်နည်းလေး ကို တင်ပေးပါမယ်နော် Irene ရဲ့ လုပ်ထုံးအတိုင်းပဲ သဘာဝပစ္စည်း/chemical မများတဲ့ product လေးတွေနဲ့ Irene ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးမို့ စိတ်ချလက်ချ လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် “Hair Care/Treatment ” ပါဝင်ပစ္စည်း ကြက်ဥ – ၁ လုံး ကြက်သွန်နီ – ၁ လုံး သံပုရာသီး – ၁ လုံး သံလွင်ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၁-၂ဇွန်း Vaseline – အနည်းငယ် … Read more
Categories Beauty Tags ဆံပင္
ဆံပင်အုံပါးသူတွေ ဆံပင်ပိုထူစေမယ့် နည်း
လှပသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာပိုင်ဆိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးတိုင်း အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ဆံပင်ဟာ တစ်လ လက်မဝက်ခန့် ကြီးထွားနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကြီးထွားမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံက ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းခံတွေနဲ့ ဗီဇအပါအဝင် များစွာသောအချက်တွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သင့်ဆံပင်ဟာ သင့်ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ အလေ့အကျင့်တိုင်း သန်စွမ်းမှုရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး မျှတတဲ့ ပုံမှန်အစားအသောက်က ရှည်လျားပြီး ပိုးသားလို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဆံကေသာအတွက် အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းက သင့်ဆံပင်ပိုမိုထူထပ်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ပိုထူစေမယ့် ဆေးနည်း လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ ကြက်ဆူဆီ ထမင်းစားဇွန်း (၂) ဇွန်း ကြက်ဥ အနှစ် (၁) လုံး ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း (၁) ဇွန်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံး အတူရောစပ်ပါ။ အဲဒီအရောအနှောနဲ့ ဆံပင်အမြစ်တွေ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ကျန်တာနဲ့ ဆံပင်လိမ်းကျံပြီး ဦးထုပ် … Read more
အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ဆံံပင္ျဖဴေနရင္ ဒါလုပ္သာၾကည္႔လိုက္ပါ
ဆံံပင်တွေပြန်နက်ကုန်ပြီးတဲ့ ဆံဖြူသူတို့ ဆံကေသာပြန်မနက်တော့ဘူးဆိုရင် စိတ်တွေပဲထိုင်ညစ်မနေပါနဲ့…နည်းလမ်းလေးရှိပါ တယ်…ပင်ကိုယ်ဗီဇအနက်ရောင်ရှိတဲ့ နတ်သစ်ရွက်ကဦးဆောင် သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါက လက်ဖက်ခြောက်ပါပဲ လက်ဖက်ခြောက်ကို မီးနဲ့ကျွတ်အောင်လှော်ပါ။ နောက်တစ်ခုကသိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို သိဖို့ိလိုပါတယ်။ ဆံပင်ပြန်နက်ဖို့သူ့ရဲ့အကူအညီကလည်း လိုတာကိုး။ ကြိတ်မှန်ရွက်က မသိလို့သာရှား တာပါ။အလေ့ကျလမ်းဘေးပေါက်တာပဲ။ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို နေရိပ်မှာလှန်း ခြောက်ရင် လက်ဖက်ခြောက်အလှော်မှုန့်(၃)ဆ၊ကြိတ်မှန်ရွက် အခြောက်မှုန့်(၁)ဆကို အုန်းဆီစစ်စစ်နဲ့ ရောဖျော်ပြီး နေတိုင်းလိမ်းပေး။ (မပျစ်မကျဲအုန်းဆီစစ်စစ်နှင့်စပ်ပါရန်) ဆံံပင်တွေပြန်နက်တာဟုတ်ပမလားတော့ မမေးနဲ့လက်ဖက်ခြောက်မှုန့်ရယ်၊ကြိတ်မှန်မှုန့်နဲ့ ရောစပ်ထားတဲ့ အုန်းဆီဆေးကိုက အမည်းရောင်လက်ကိုစွဲတော့တာ တစ်လနှစ်လစွဲစွဲမြဲမြဲသာလိမ်းကြည့်လိုက်..။ အဲ့ဒီဆေးခေါင်းလိမ်းဆီသုံးနေချိန်အာလူးစားရပါတယ်။ အာလူးကို သုပ်လိုက်၊ချက်လိုက်စားပေးရပါတယ်။ အဟာရက လည်း ကောင်း၊ဆေးကလည်း ကောင်းဆိုရင် ဆံပင်တွေပြန်နက်လာမှာသေချာနေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်သာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ…အံံ့သြဖွယ်ဆံပင်နက် ဆေးပါ။အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်မည်ထင်ပါသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးသူတို့အတွက် တော့ဆံပင်ပြန်ဖြူနိုင်မည်မထင်ပါ။ဆေးဆရာကြီး ဘိုးတော်သိန်းပေးသော ဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။ လူလောကဝယ် မည်းရာကဖြူသွားတတ်သလို ဖြူရာက လည်းပြန်ပြီးမည်းနက် တတ်သည်မှာ ဆံကေသာလည်းပါဝင်နေပါသည်။ ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) … Read more
Categories Beauty Tags ဆံံပင်တွေပြန်နက်
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသက္ *ကရမက္ ဆိုေတာ့ ကရမက္က ဘာေတြေကာင္းလဲ
အမျိုးသမီးများအသက်* ကရမက် *တဲ့ ကရမက်က ဘာတွေကောင်းလဲ “နံ့သာဖြူနံ့သာနီ အကျော်စမ္မာ ကရမက်ဆိုတဲ့နံ့သာငါးမျိုးစာရင်းဝင်” ကရမက် အကြောင်းရှင်းပြပါရစေ ကရမက်ကအေးခါး အရသာနဲ့အပူကိုစုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့ဆေးပါ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက် အပူများလို့ဖြစ်လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေဟာ အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြတတ်ကြပါတယ် တစ်ချို့ကအပူအစပ်စားအအေး‌သောက်လို့မထွက်ရတဲ့အခိုးတွေစုဖွဲ့ တာ တစ်ချို့က ကံ စိတ်ဥတုအာဟာရ တစ်မျိုးမျိုးကြောင့် အကြိတ် အဖု ရည်ကြည်အိတ် နဲ့ဆီးအိမ်နားကစုဖွဲ့ပူလို့ ခြေဖဝါးကစူးလို့ပူတာမျိုး မီးယပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရာသီသွေးဆုံးခါနီးဖြစ်တဲ့အရေပြားပေါ်ကအကွက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ယားယံတာတွေ ပျောက်ကင်းစေပါတယ် ရေကိုဝအောင်ချိူး ပြီးရင်ကရမက်လေး ရေကြဲလေးလိမ်း အပူထွက်ပြီး အပူအောင်းတာသက်သာတော့အဖုအကြိတ် အရည်ကြည်အိတ် စတာတွေ သက်သာတယ် ရေကိုဝ​အောင်ချိုးပြီး ကရမက်လေးကိုသွေးပြီးလျက်ပေးရင်လည်းလျှာကနေတစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေဆီရောက်ပြီး ကျန်းမာသက်ရှည်အပူအခိုးကင်းစေပါတယ်။ သွေးလိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သလိပ်ကြေစေတယ် နှလုံးရောဂါ ဆီးရောဂါနဲ့ညောင်းကျရောဂါတွေလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ် အပူများသူတွေ နေပူမီးပူထဲအလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကကရမက်ပါ နေ့စဥ် ကရမက်​လေးအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းပါရ​စေ ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ “ဆီး ( ပူ၊နည်း၊ဝါ) … Read more
Categories Beauty, Hearth Tags ကရမက်
အချိန် နှစ်မိနစ်ထဲနဲ့ သွားတွေကိုဖြူဖွေးတောက်ပလာအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း လှပတဲ့အပြုံးတပွင့်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဓိကကျတဲ့လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုလှပတဲ့ အပြုံးတပွင့်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ သွားတွေရဲ့အလှတရား မပါပဲ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့သွားတွေလှပလာစေဖို့အတွက် သွားဆေးခန်းမှာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာပဲသွားတွေကို ဖြူဖွေးလှပလာအောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်ခြင်းနဲ့ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း စတာတွေဟာ သွားတွေကိုဝါစေတဲ့ အဓိကပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး သွားတွေရဲ့ကြွေလွှာကိုသာမက အတွင်းသွားရိုးရဲ့ သဘာဝအရောင်ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားတွေကိုဖြူဖွေးတောက်ပစေဖို့ သွားဆေးခန်းမှာဂျီးချွတ်တာတွေ သွားခြစ်တာတွေပြုလုပ်ရင်တောင်မှ ခဏတာပဲဖြူဖွေးတောက်ပစေသလို သွားကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုလည်း ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုငွေကြေးကုန်ကျမှုနည်းပါးပြီး သဘာဝအတိုင်း သွားတွေကို လှပလာစေဖို့အတွက်ဆိုရင် ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ခုနဲ့ စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ၁။ မုတ်ဖုတ်ဆိုဒါ ၂။ အုန်းဆီ နည်းလမ်းက ရိုးရှင်းပါတယ် မုတ်ဖုတ်ဆိုဒါကို အုန်းဆီနဲ့ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ရောနှောလိုက်ပါ။ … Read more
Categories Beauty Tags သွာ